Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Skål International Thailand dia mandefa marketing any amin'ny toerana misy azy na eo aza ny fihenan'ny COVID
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Skål International Thailand dia nandefa andian-tranonkala Destination Marketing miaraka amin'ny fifantohana matanjaka amin'ny fampiroboroboana ny orinasany ho anisan'ny tombotsoan'ny mpikambana ao aminy.
Skål Thailand dia nanangana fanentanana amin'ny marketing ho any amin'ny toerana ifantohana amin'ny fahitana indray ny firenena.
Amin'ny fampiasana sary manaitaitra ny hatsarana sy ny kolontsaina Thailand, ny tranonkala dia mitaona ny mpandeha ho any amin'ny tontolo virtoaly izay mety hiroborobo ny nofinofin'ny dia.
Amin'izao fotoana izao, i Thailand dia miaina fitomboan'ny tranga COVID-19.
“Amin'ny ezaka hamporisihana ny fiverenan'ireo mpizahatany sy mpitsidika an'i Thailand (raha vantany vao nosokafana tanteraka ny sisin-tany ary azo antoka ny hanaovana izany), dia manolo-tena izahay hanohana ireo mpikambana ao aminay amin'ity hetsika marketing ity.
"#Rediscoverthailand dia mifantoka amin'ny sary manaitra ny hatsaran-tarehy voajanahary ao Thailandy ary koa ny fiainana an-tanàna be pitsiny sy ny tantaran'ny kolontsaina manankarena," hoy ny filohan'ny Skål International Thailand Wolfgang Grimm.
Ny hevitra voalohany, #rediscoversamui, dia natolotry ny Skål Club of Koh Samui voalohany. Noho ny fahombiazany, Skål International Thailand dia manitatra azy amin'ny faritra rehetra miaraka amin'ny Skål Club. Ny mpikambana Skål dia manana ny asan'izy ireo ao amin'ny vavahady misy ny #rediscoverthailand 100% ny komisiona ary miakatra amin'ny tranokalan'izy ireo ny referansa rehetra.
#rediscoverthailand - www.anjatgogl.com
#rediscoverbangkok - www.anjatgro.com
#rediscoverchiangmai - www.anjatgorner.com
#rediscoverhuahin - www.anjatselr.com
#rediscoverkrabi - www.anjatgernaw.com
#rediscoverphuket - www.anjatselr.com
#rediscoversamui - www.anjatownlife.com
Skål International dia fikambanan'ireo matihanina momba ny dia sy fizahan-tany izay mandrisika sy mamorona tambajotram-pifandraisana manerana an'izao tontolo izao. Io no hany vondrona iraisam-pirenena manambatra ny sampana rehetra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny mpikambana maherin'ny 12,714 ao amin'ny Skål International dia misy mpitantana sy mpanatanteraka indostrian'ny Travel sy fizahan-tany izay mivory amin'ny sehatra eo an-toerana, nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena hanao raharaham-barotra amin'ny namana manerana ny 335 Skål Clubs manerana ny firenena 100.
Ny singa fototra an'ny Skål International dia ny Club, toa ny Skål International Thailand izay miasa ho mpanelanelana amin'ny Skål International amin'ny hetsika Skål ao anatin'ny fetra ara-jeografika an'ny Club.
Eo amin'ny COVID eo aloha, ny totalin'ny tranga ao Thailand dia nisondrotra ambony hatrany ambany 7,000 tamin'ny faran'ny taona lasa lasa 88,000 mahery. Ity fisondrotana ity dia atosiky ny fisian'ny onja fahatelo izay nanomboka tao amin'ny toeram-pandihizana Bangkok tamin'ny volana martsa. Hatramin'ny nanombohan'ny onja fahatelo dia nahitana aretin-tratra maherin'ny 36,000 ny manam-pahefana Thai nandritra ny volana aprily ary maherin'ny 21,000 ny aretina nandritra ny 11 andro voalohan'ny volana Mey fotsiny.